#နောက်ကြောင်းပြန်သောကြာနေ့ - Classic မြို့ကြီးအစုံ
#ThrowbackThursday - Classic မြို့ကြီးအစုံ
17 / 03 / 2016 ကြွယ်ဝသော 1484 Views စာ0မှတ်ချက် 1980, 1987, 1988, 1990, 1994, လေဆိပ်, Classic, Lego, ပြေးလမ်း, မြို့
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က article ဟာအလွန်လူကြိုက်များပြီးဒီအပတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအာရုံစိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ ငါအချိန်ပြန်သွား။5ကောက်ယူပါတယ် classic Lego နေဆဲမကြာသေးမီထားကြောင်းမြို့အစုံ City အရှက်ကွဲစေတတ်၏။ ငါနေဆဲမြို့ဆောင်ပုဒ် Ace နှင့်လက်ရှိဖြစ်ခဲ့သည်ထင်ပါတယ် City ဆောင်ပုဒ်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အားနည်းနေသည်။ ဒီတစ်ခါလည်းငါဟာငါ့ရဲ့မိဘလားဒါမှမဟုတ်ငါကလွမ်းဆွတ်တမ်းတနေတယ်ဒါပေမယ့် Town set တွေကပိုပြီးတန်ဖိုးရှိတယ်၊ City.
ဒီတော့ဒီအပတ်မှာမြို့ကြီးပြကြီးတွေငါ့အကြိုက်ဆုံး ၅ ချက်ရှိတယ်။ ပိုများတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါ ၅ ယောက်စလုံးပိုင်ဆိုင်ပြီးဖြစ်လို့အထူးမှတ်ဉာဏ်ရှိခဲ့တယ်။ ငါတို့ st လိမ့်မယ်art အသက်အကြီးဆုံးနှင့်ရှေ့ဆက်လမ်းကိုအလုပ်လုပ်:
၁၅၉၂ - Town Square - ရဲတိုက်မြင်ကွင်း (၁၉၈၀)
အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးဒီအတိုင်းမနေနိုင်ဘူး၊ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃၆ နှစ်ကငါမှာဗြိတိသျှဗားရှင်းရှိတယ် (ဒါက Weetabix Cereal Promotion) ။ ဒါပေမယ့်ဒတ်ခ်ျနဲ့ဂျာမနီလိုအခြားမူကွဲတွေရှိတယ်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံတ ဦး နှင့်အတူလာ၏ classic စာအုပ်ဆိုင်၊ ငါးကြော်ဆိုင်နှင့် ရဲတိုက်ကြော်ငြာတစ်ခုအဖြစ် ဆောင်ရွက်သော အင်္ဂလိပ်အဆောက်အအုံ ဥပဒေယူနီယံဂျက် အစုံအလင်နဲ့ အုတ်ဆောက်ထားတဲ့ မြင်းတစ်စီးလည်း ရခဲ့ပါတယ်။ 471 p ရခဲ့ပါတယ်။artမြို့နှင့်ရဲတိုက်နှစ် ဦး စလုံးဖောင်းပွပြီး 11 အသေးစား, အတူ! ထို့အပြင်လမ်းပြားနှစ်ခုလည်းရှိသည်။ used အသုံးပြုထားသောယာဉ်တစ်စီး၏ပျမ်းမျှစျေးနှုန်းမှာပေါင် ၆၉.၁၈ ဖြစ်ပြီး MISB ကသင့်အား£ 69.18 ပြန်ပေးလိမ့်မည်။
၆၃၉၃: Big Rig Truck Stop (၁၉၈၇)
ယခု 1987 သို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့်ငါပထမ ဦး ဆုံးအစုကိုငါရသောအခါငါဒုတိယဖြစ်စဉ်နေစဉ်ဤသည်နောက်ကျော '2 အတွက်အသစ်စက်စက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါကြီးမားတဲ့ Smokey နှင့်ဒဏ္fanာရီပန်ကာရုပ်ရှင်ဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်ဤ set ကိုရုံအလွန်အေးမြဖြစ်ခဲ့သည်ဒါကြီးမားတဲ့တူးစင်ကိုချစ်၏။ ကျနော်တို့ 87 Rigs,3p တယ်arts,5minifigres နှင့်ဟုတ်ကဲ့2လမ်းပြား။ ငါ baseplates နှင့်ပတ်သက်။ အမှတ်အောင်တာကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသလား။ ယနေ့ခေတ်တွင်အသုံးပြုသောအစုသည်သင့်ကို£ 60 ၀ န်းကျင်ပြန်ပေးလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင် MISB ကိုပေါင် ၂၁၀၄ ပေးဆောင်ရန်မျှော်လင့်လိုလျှင်!
၆၃၉၅: Victory Lap Raceway (၁၉၈၈)
Speed ​​Speed ​​ခေါင်းစဉ်ကိုငါရွံရှာတယ်။ အမှိုက်တွေတကယ်တွေ့တယ်၊ ဒါပေမယ့် ၁၀၀၁ စတစ်ကာတွေကပ်ပြီးကားအမှတ်တံဆိပ်တွေကပ်ပြီးလူတွေကသူတို့ကအစလို့ထင်ကြတယ်! အခုသူတို့ကိုဒီလှပမှုနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးပိုကောင်းတဲ့အရာကိုပြောပါ။ အိုကေ Shell ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကိုရခဲ့တယ်art/ မှတ်တိုင်တစ်ခု၊ တံခါးပေါက်၊ ကင်မရာ၊ ပြိုင်ပွဲဝင်ကား ၄ စီးနှင့်အခြားအရာများဖြင့် baseplates နှစ်ခုကိုဖြောင့်အောင်လုပ်ပါ။ ဒီကိစ္စမှာပါ ၀ င်တဲ့သွင်ပြင်လက္ခဏာတွေကကျွန်တော့်အတွက်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းပြီးသင်ပို baseplates များများ ၀ ယ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကငါဟာ F4 ပြိုင်ပွဲလမ်းကြောင်းအမျိုးမျိုးကိုလေ့ကျင့်ခဲ့တယ် ၆၀၆ စနဲ့ဘယ်လောက်ကျသင့်မှာလဲarts နဲ့ 13 တို့ကသူတို့ကို 13 minifigures ရေတွက်။ ငါ့ကိုရက်သတ္တပတ်၏မည်သည့်နေ့ရက်ကိုမဆို Speed ​​Racer ကျော်ဒီ set ကိုပေးပါ! ဒါက MISB ဗားရှင်းကိုပေါင် ၂၅၀ ၀ န်းကျင်နဲ့ဝယ်ယူနိုင်တာပါ။
၆၃၉၉: လေယာဉ်မှူး (၁၉၉၀)
ခင်ဗျားသိလား။ ငါ Monorail set ကိုမစွန့်လွှတ်နိုင်ဘူး၊ ငါပိုင်တဲ့တစ်ခုတည်းကိုရွေးလိုက်တယ်၊ ဒါကအထင်ကရအစုံပဲ။ AFOLS က monorail ကိုအထူးနေရာတစ်ခုတွင်ကိုင်ထားသည်။9အသေးစား, 767 partကိုယ့်ပင်ဒီအစုံအတွက်ပစ္စည်းပစ္စယကိုဖုံးလွှမ်းရန်စတင်မ။ ၄ အမျိုးမျိုးသောအခြေစိုက်စခန်းများပေါ်တွင်အရွယ်အစားနှင့်အတက်အဆင်းများရှိပြီးပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်သည်။ ၎င်းကိုလေဆိပ်အစုံသို့ပေါင်းထည့်ပါ၊ သင်ကစားခြင်းအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူရက်ပေါင်းများစွာအဆုံးတွင်ပျောက်ဆုံးသွားလိမ့်မည်။ ပျမ်းမျှအားအသုံးပြုမှုတစ်ခုအတွက်ပေါင် ၃၀၀ ကျော်နှင့် MISB အတွက်£ 4k ကျော်သုံးစွဲရန်မျှော်လင့်ရပြီး၊ Lego ပြန်လာခဲ့မှာမဟုတ်ပေမယ့်သူတို့လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူတို့ကဒါကို hash လုပ်မှာကိုငါကြောက်တယ်။
6597: Century Skyway (၁၉၉၄)
ရှေ့သို့ ၄ နှစ်ကြာရှေ့သို့လှည့်ပါ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကလေး၏နောက်ဆုံးမြို့တော်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးလေယာဉ်ကွင်းလည်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏မြို့မြင်ကွင်းသို့ထည့်ပြီးကျွန်ုပ်သည်အထက်တန်းကျောင်းတွင်ချက်ချင်းမေ့နေသည်။ လေယာဉ်ပြေးလမ်းနှင့်တက္ကစီလမ်းအတွက်အခြေစိုက်စခန်း ၆ ခုရှိသည်။ dep နှင့်အတူရဟတ်ယာဉ်နှစ်စင်း, ခရီးသည်တင်လေယာဉ်, ထိန်းချုပ်ရေးမျှော်စင်နှင့်လေဆိပ်arture Lounge နောက်တဖန် Lego 12 minifigures နှင့် 800 ကျော် p နှင့်အတူကထုပ်ပိုးarts ။ လေဆိပ်ရုံတိုင်းကဒီလောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာတောင်မှမနီးစပ်သေးဘူး။ ငါလေဆိပ်တစ်ခုထားချင်ရင်အဲဒါငါရလိမ့်မယ် ပျမ်းမျှအားဖြင့်အသုံးပြုသောပစ္စည်းသည်ပေါင် ၁၀၀ အောက်နှင့် MISB သည်ပေါင် ၂၆၇ ပေါင်ရှိသည်။
ဒါကြောင့်သင်ဤ5အထင်ကရအစုံနှင့်ပြပွဲဖြစ်ကြောင်းသဘောတူကြဘူး Lego အကောင်းဆုံးမှာ ဒီစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီဒီစံနှုန်းကိုနောက်တဖန်ထပ်မံမတွေ့ရတော့မှာကိုငါစိုးရိမ်တယ်။
← Lego နှင့်အတူအခမဲ့ Poe ရဲ့ X- တောင်ပံ Star Wars အဆိုပါတပ်ဖွဲ့ကိုနှိုးဆျော
HUKD မှနောက်ဆုံး LEGO အပေးအယူ - ၄/၁၂ →